Fizahan-tany Myanmar - ny olana ara-pitondran-tena
Home » Toerana fitsangatsanganana » Fizahan-tany Myanmar - ny olana ara-pitondran-tena
Oktobra 17, 2017
Misy ve ny fampiroboroboana ny fizahan-tany amin'ny famahana ny olana ara-pinoana, politika, sosialy ara-toekarena sarotra toa ny efa niainan'ny vahoaka Rohingya sy ny manampahefana Myanmar ankehitriny?
Afaka manome vahaolana ve ny fizahantany amin'ny fametrahana maharitra ireo mpitsoa-ponenana Silamo an'arivony Rohingya miampita ny sisintanin'i Myanmar mankao Bangladesh?
Tsy mino aho. Mikasika ny fandrakofana amin'ny haino aman-jery ihany koa, mino aho fa ny fampahalalam-baovao mpitsangatsangana rehetra (mifanohitra amin'ny haino aman-jery) dia mampiroborobo ny fizahan-tany izay manome fidiram-bola maharitra ho an'ny vahoaka, indrindra ny mahantra.
Te hametra ny fanohanany an'io loharanom-bola io ve ny vondrom-piarahamonim-pirenena fizahan-tany?
TSIA ny valinteniko, te-hanohana sy hanatsara izany aho. Mazava ho azy fa manahy aho fa maro no nafindra toerana ary manantena aho fa hihatsara tsy ho ela ny raharaha. Mino aho fa tsy ny valiny no manohana ny fizahan-tany sy ny vola azo.
Tantaran'i Bagan taloha
Tsy voakitika ny fiarovana ny mpizahatany ao Myanmar satria ny krizy mpitsoa-ponenana dia any amin'ny faritra lavitra akaikin'ny sisintanin'i Bangladesh, izay tsy voafetran'ny mpizahatany hatrizay.
Saribakoly amidy amin'ny tsena eo an-toerana akaikin'ny Tempolin'i Ananda any Bagan
Ny fitsidihana an'i Myanmar no zavatra tsara tokony hatao satria mahasoa ny olona eraky ny firenena amin'ny firazanana na fivavahana io.
Any amin'ny firenena maro dia manana olana mitovy amin'izany isika amin'ny alàlan'ny fifanolanana eo amin'ny antokom-pinoana samihafa, matetika any amin'ny faritra manamorona ny sisintany.
Toa an'i Myanmar, mino tanteraka aho fa tsy misy idiran'ny fizahantany amin'ny famahana izany olana izany. Matetika ireo mpizahatany dia kivy tsy hiditra amin'ireo faritra ireo. Na izany aza tsy manakana ny mpizahatany mankafy fety mahafinaritra izany. Hahazo vahaolana ara-politika ny famahana ireo olana ireo.
Nitsidika an'i Myanmar matetika aho. Vao haingana aho no nitsidika indroa; tamin'ny Aogositra sy Oktobra tamin'ity taona ity.
Ilay vatolampy volamena mahatalanjona ao amin'ny MON State
Ny fitsidihako tamin'ny volana aogositra dia fitsidihan'ny tena manokana niaraka tamin'ny vondrona Thai sakaiza folo. Ny vondrona dia liana indrindra, nandritra ny 3 andro ny fitsidihana, tamin'ny fanaovana fahamendrehana; mihinana sy mandeha any amin'ny Vatolampy malaza ao amin'ny Mount Kyaiktiyo (Kyite Htee Yoe). Iray amin'ireo tranokala telo manan-danja indrindra ao Myanmar.
Ny fitsidihako tamin'ny volana oktobra dia ny famerenako ny zava-mitranga ao Myanmar mikasika ny fizahantany. Nandany herinandro nitetezana ny firenena aho teo ambany fitarihan'ny Marketing momba ny fizahantany ao Myanmar (MTM).
Diabe Phaung Daw Oo eo amin'ny Lake Inle
Ny zava-nisongadina tamin'ny fitsangatsanganana dia ny fitsidihanay ny Inle Lake hijerena ny festival Phaung Daw Oo mahafinaritra sy ireo hazakazaka lakana tokana.
Mpizahatany sy mponina marobe an'arivony no mirohotra mijery ireo hazakazaka
Nandritra ny fitsidihako roa farany dia tsikitsiky mafana sy fifampiarahabana mahafinaritra fotsiny no niainanay. Tsy nisy fotoana nilana olana mihitsy ny filaminana. Tena nitondra ny fiainana tokoa toy ny mahazatra.
Ireo mpanjono ao amin'ny Lake Inle dia mihetsika ho an'ireo mpaka sary
Miroso amin'ny vanim-potoana vanim-potoana i Myanmar ary fotoana marim-pototra izao hitsidihana ny firenena. Manoro hevitra anao mafy aho ny hanaovanao izany.
Tena mahazo aina aho amin'ny maha mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina mitety faritany ahy ny manohy mitsidika an'i Myanmar ary hanome ny toekarena fidiram-bolan'ny fizahan-tany ary hanitatra ny zavatra niainako manokana. Raha ny momba ny olana ara-moraly (hanohanana ny fizahantany any Myanmar) dia tsotra ny valinteniko - eny.
Teraka anglisy anglisy Andrew J Wood, mpanoratra mpanoratra fizahan-tany tsy miankina ary hotely matihanina tamin'ny ankamaroan'ny asany. 35 taona i Andrew no nampiantrano sy nampiantrano azy. Mpikambana Skal izy ary talen'ny WDA Travel Co. Ltd sy ny zanany, Thailand by Design (tours / fitsangatsanganana / MICE). Nahazo diplaoma tao amin'ny hotely Napier University, Edinburgh izy. Andrew koa dia mpikambana taloha tao amin'ny Komity Mpanatanteraky ny Skal International (SI), ny Filoham-pirenena SI THAILAND, ny filohan'ny Club SI BANGKOK ary SI AA A.VP any Azia atsimo atsinanana ary talen'ny fifandraisana amin'ny besinimaro, Skal International Bangkok. Mpampianatra tsy tapaka ao amin'ny Oniversite isan-karazany any Thailand izy, ao anatin'izany ny Sekolim-pianarana fandraisam-bahiny ho an'ny oniversite Assuming sy ny Japan Hotel School any Tokyo.
Ny fikambanan'ny fikambananan'ny fizahan-tany sy ny fandraisam-bahiny indiana dia manambara manamboninahitra vaovao
Ny Cobalt Air dia mandresy ny fanombohana ny fiaramanidina CAPA amin'ny taona